Iziphumo zexesha elizayo zeerobhothi kunye netekhnoloji entsha kwezengqesho | Ezezimali
Lungelelanisa notshintsho olukhulu, oluphikisayo noluluqilima olo Itekhnoloji entsha kunye neerobhothi unokuziqhelanisa nayo nayiphi na indawo, ayisoze ibe lula okanye kube lula ukusombulula.
Utshintsho kunye neziphumo eziveliswa kolu hlobo lwento zinokuqhuma ngaphandle kwemfesane kwindawo ethile kwaye ukudideka kunokuba kwangoko.
Impembelelo yomsitho onjalo unakho ukubekwa kwiindawo ezininzi zobukho bomntu. Ihlabathi lomsebenzi (iinkampani kunye nabasebenzi) ngumzekelo woku, kwangaxeshanye impembelelo yayo iya kuba nefuthe kuqoqosho lomntu kunye nosapho, nakumazwe nakwimimandla.
Ngokuqinisekileyo sele sele ikhona Ishishini lanamhlanje, enokubakho ichaphazela indawo enkulu yoluntu ngomso.
Ukudityaniswa kwamanani emisebenzi, iteknoloji ephazamisayo, irobhothi: Amanye amagama ngokunxulumene nale ngxaki apho ukubonakaliswa kubalulekile.
Umntu, imveliso yobuchule bakhe bokuyila, ukwazile ukutyhubela imbali ukuthatha amanyathelo amakhulu kukufumanisa kunye netekhnoloji, kodwa phakathi kokuxhuma kunye nemida kuye kufuneka achaze kwaye anyamekele inqanaba lakhe lokusebenza ngokweenkcukacha, kuba kuhlala kukho amandla amaninzi kunye namandla anokuqokelelwa kwiziphumo nakwinkqubela phambili, enokuthi ibe yi-boomerang ephelisa ukonakalisa umbhali wayo.
Ukukhankanya nje amandla enyukliya kunye nazo zonke iziphumo ezilungileyo nezonakalisayo eziye zabakho kwiplanethi, kwaye kuba iyilwe ngumntu ukukwazi ukuyixhaphaza; kwanele ukuba uqaphele oko qhinga lokucinga Kuya kufuneka ukuba ikhatshwe yinkqubela phambili, ukuze ingaphulukani okanye ekugqibeleni ichaphazeleke ngamandla.
Siza kweli nqaku ngesihloko esibhekisa kwi ubuchwepheshe obutsha, iirobhothi, ubukrelekrele bokufakelwa y Iziphumo kwingqesho esele zisasaziwe, kodwa izehlo zazo ziya komelezwa ngokuthe ngcembe kunyaka ngamnye odlulayo.
Masiwuhlolisise lo mbandela kwimiphetho enomdla, ebonakala ngathi ineziphetho ezichaseneyo, kwaye sinako zibone kwaye ziqiqe malunga nokuba zisichaphazela njani, kweliphi inqanaba, izibonelelo-izinto ezingalunganga kwaye ukuba siyakwazi ukulungelelanisa iziphumo zalo ezilungileyo nezingalunganga, ubuncinci sicinga ngendlela ekujongwa ngayo lo mbandela namhlanje.
1 Itekhnoloji ephazamisayo kunye nokudala imisebenzi
2 Ngaba iteknoloji ingasenza sibe nobuhlanga?
3 Icandelo lezobugcisa linokudala imisebenzi
3.1 Ixesha lokuphendula kunye nokuziqhelanisa notshintsho Ngaba liza kusinika ixesha?
Itekhnoloji ephazamisayo kunye nokudala imisebenzi
Las ubuchwepheshe obuphazamisayo, ekwabizwa ngegama Izinto eziphazamisayo ezintsha, zezo teknoloji kunye nezinto ezintsha ezibangela uhlengahlengiso olukhulu okanye oluncinci, notyekelo lokunyamalala okanye ukwenza iindlela, izixhobo kunye neemveliso ziphelelwe lixesha.
Ngale ndlela, kunokwenzeka ukuba ukhuphisane ngokukuko ngokuchasene neetekhnoloji ezibalaseleyo ngalo mzuzu, ukuseka nokudibanisa kwimarike.
Kwizinto eziphazamisayo ezintsha, ukuba zihlalutyiwe kwixesha elifutshane, kunokuphikiswa ukuba kukho amathuba aphezulu okuba yenzeke ukwanda kwentswela-ngqesho kumacandelo athile. Nangona kunyanzelekile ukuba uchaze, ngokujonga ixesha elide, xa kukho ukwanda kwemveliso, imisebenzi ingadalwa.
Iirobhothi kunye nobukrelekrele bokuzenzela buya kuchaphazela uluntu kunye nengqesho
Ubukrelekrele bokwenziwa kunye neerobhothi ziya kuba zezi zilandelayo Xhuma ukuba uluntu luya kunika, kuthelekiswa kuphela nohlaziyo lweshishini olutshintshe umhlaba ngelo xesha.
Ngokujongana nesihloko seerobhothi kunye nobukrelekrele bokuzenzela, saqala ukusondela iingozi kunye namandla anokubakho, oko kungangqinelana nezinto eziyilwe ngabantu.
Ngokunokwenzeka sisondela kwikamva apho eluntwini, ukuba nomsebenzi ngokwawo kungazukuvakala ukuvavanya ukuba umntu unelungelo lokutya na. Kuthiwa kunokwenzeka ukuba, ukunqongophala komsebenzi kuyahambelana kwiplanethi ngezi zizathu zichaziweyo.
Forrester, inkampani yophando yentengiso, ithe mhlawumbi malunga nezigidi ezingama-25 zemisebenzi inokunyamalala kwiminyaka elishumi, Imveliso kwinkqubela phambili yetekhnoloji.
Xa iirobhothi kunye nobukrelekrele bokufakelwa bufika, kwaye bafika ngokungathandekiyo, ngawo onke amandla kunye neziphumo eziya kuba nazo kuqoqosho, ekuhlaleni nakwezengqesho; emva koko akusayi kubakho nto ishiyekileyo ngaphandle kokuphinda ucinge ngemicimbi yolu hlobo, ukuba khange yenziwe kwangaphambili.
Abaninzi balijonga kakuhle ikamva, kwaye bathi akukho nto iya kusala ngaphandle kokuziqhelanisa nokuzilungisa kwakhona kubuchwephesha.
Kububulumko ukufikelela kwezi meko ngolwazi olwaneleyo. Nokuba yeyiphi na indlela, unyaka nonyaka ziya kuba mihla le ebomini bethu olu hlobo lobuchwephesha, kwaye inkqubo yokwenziwa iya kukhula.
Xa utshintsho luza, imicimbi emininzi inxulumene irhafu, uqoqosho nengqesho. Iziphumo zobukrelekrele bokuzenzela eluntwini ziya kuba namandla kakhulu.
Ezinye iingcali ziqinisekisa ukuba iirobhothi ngekhe bathathe indawo yemisebenzi yabo. Oko kukuthi, abayi kucingelwa okanye bayilelwe le njongo, kodwa endaweni yoko imisebenzi ebambeleyo.
Ujoliso luya kuba nakho ukuthatha indawo yemisebenzi ephindaphindwayo okanye imisebenzi okanye ezo zifuna ukuchaneka okukhulu, umba ubuchule obunokubonelela ngetekhnoloji.
Akunyanzelekanga ukuba ibe mbi, kodwa lumka!
Xa ukwenziwa kwedijithali Ukuzibandakanya emsebenzini, amanqanaba okusebenza kunye nemveliso anokunyuswa ngokuqaphelekayo, kananjalo imisebenzi inganda.
Kuyatshiwo ukuba ukuba iSpain ityale imali ngokwaneleyo de kube li-2020, imisebenzi emitsha engama-250 inokuveliswa minyaka le. Oku kuthethwe ngu I-CEOE (Umanyano lweSpanish lweMibutho yoShishino).
Ezinye iingcali zezoluvo, ukuba uqikelelo lolu hlobo lunethemba kakhulu. Bayavuma ukuba kuchanekile ukuba ubuchwephesha obutsha bunako ukuvelisa ubutyebi kunye nengqesho, kodwa hayi ngexesha elifutshane kangako.
Ngaphaya koku, kukho uluvo olungekuko ubukho belizwe elinobuchwephesha kunye nelidijithali iya kuvelisa imisebenzi emininzi, Ukuba akunjalo ngokuchaseneyo.
Iinkampani ezenza utyalomali olubonakalayo kwidijithali kunye netekhnoloji yamva nje ziya kuba nemveliso ephezulu, kodwa kwangaxeshanye baya kufuna abasebenzi abambalwa.
Ezinye iingcali zicebisa ukuba ukufakwa kwikhompyuter kunye nokuqhubela phambili kwitekhnoloji ngendlela ekhawulezileyo ayisiyiyo kanye into ekufuneka ikhokelele uluntu kwimeko yentswela-ngqesho ethe gqolo inyuka.
Ukuba imveliso iyanda, kuyakubakho umthamo omkhulu wobutyebi behlabathi, ovelisa ngale ndlela iimfuno ezintsha kunye neminye imisebenzi kwimisebenzi eyahlukileyo.
Kukho enye ingxaki kwaye inxulumene nenyaniso yokuba imisebenzi enobudlelwane obubalulekileyo netekhnoloji yedijithali iya kufuna a ubuchule obaneleyo bokudala dibanisa uqeqesho olwaneleyo.
Abo bangakhange babandakanyeke kolu hlobo lwetekhnoloji luza kufuna ixesha elithile ukuze bakwazi ukuzisebenzisa. Ezi nkqubela phambili kuya kufuneka zikhatshwe ngumsebenzi wentlalo kunye notyalo mali olomeleleyo kubemi.
¿Ngaba iteknoloji ingasenza sibe nobuhlanga?
IJapan lilizwe elinobunkunkqele ngokwenyani kunye noluntu kwiteknoloji. Banxibelelana ngcono neerobhothi kwimizi-mveliso yabo kunakwabo baphambukeli abakhuphisana ngemisebenzi. Ngaba bubuhlanga obu? … Kuhleli ukubonwa.
Uhlalutyo luba nzima xa ixabiso eliphezulu itekhnoloji nayo yonke into enxulumene noko kule ndlela inikezela kwiimveliso zihlalutywa ngocoselelo, zivumela umgangatho kunye nokwahluka kokugqwesa.
Icandelo lezobugcisa linokudala imisebenzi
Iingcali ezimbalwa zithi iingxaki zengqesho kunye nokusingqongileyo, zivelisa ngokwazo utshintsho oluhlala lusenziwa kwiimeko ezahlukeneyo. Kwisandle esinye imisebenzi iyawa ngenxa yengxaki kumazwe ahlukeneyo, kodwa kwangaxeshanye kukho dala imisebenzi ezazingekho ngaphambili.
Itekhnoloji kunye ne-R + D + i (uphando, uphuhliso kunye nokuyila) icandelo linamandla amakhulu okuvelisa imisebenzi. Ukuze ilizwe liphuhlise kwaye lenze ngendlela engxamisekileyo, kufuneka ivelise ulwazi lwenzululwazi kunye netekhnoloji, njengoko iinkampani zalo ziqikelelwa ngamandla kwi-R + D + i. Ukuguqulwa kwedijithali kuya kuba nento yokwenza nayo.
Zonke iinzame ezenziwa ngamazwe ukukhuthaza itekhnoloji kunye notyalo-mali kuphuhliso kunye nophuhliso, iyakukhetha ukudalwa kwemisebenzi. Imizekelo yile inxulumene ne-biotechnology, ICT (ulwazi kunye neetekhnoloji zonxibelelwano) kunye ne-e-commerce.
ESpain, Sele kutshiwo ziingcali ukuba kwicandelo lobuchwepheshe iya kuba yenye yezoya kuthi zivelise eyona misebenzi kwixesha elifutshane.
Ixesha lokuphendula kunye nokuziqhelanisa notshintsho Ngaba liza kusinika ixesha?
Amazwe ehlabathi aye anamava okuphela kwemisebenzi ngamaxesha athile kwimbali yawo. Uqoqosho lwehlabathi lube notshintsho olukhulu njengoko kuye kwaba njalo ukusuka kuqoqosho lwasemaphandleni ukuya kwi-Industrial.
E-USA umzekelo, lo msitho waqwalaselwa kwisithuba (1870-1970) kunye neminyaka eli-100. Ngalo mzuzu banyamalala kufutshane ne Iipesenti ezingama-90 zemisebenzi ezisuka ezilalini.
Kwakweli lizwe linye nakwinqanaba phakathi ko-1950 ukuya ku-2010, ngenxa yenkqubela phambili kwezobuchwephesha, malunga Ama-75% emisebenzi kwimizi-mveliso.
Esinye seziphumo ezibonwe ngokunxulumene ngqo nale meko yayikukuvela "koqoqosho lwenkonzo". Nokuba kunjalo, uninzi lwemisebenzi luvela kwicandelo leenkonzo hayi kwicandelo lemveliso.
Imeko yethu namhlanje iya isiba nzima, kuba Ixesha elide lokuziqhelanisa alinakwenzeka njengalowo ubalwe kwimizekelo ekhankanyiweyo, iminyaka engama-60 okanye eli-100.
Kuya kufuneka ukuba ube nakho zilungelelanise kwi-10 okanye kwi-15Ngaphandle koko sinokuzifumana sisengxakini enkulu, ngokunokwenzeka sijamelene nayo eyona ngxaki inkulu yokungabikho kwemisebenzi Ngalo lonke ixesha.
Sibonile ukuba ayizizo zonke izimvo ezifanayo, ukuba ingxaki ayikho lula, kwaye iplanethi kunye noluntu lusendleleni eya kule meko, esele ithathelwe ingqalelo ngokungenakuphepheka.
Imikhosi yezentlalo nezopolitiko, kunye nendawo yezoshishino, kufuneka zilungelelaniswe ukuze oku kuxhuma kuhambelane kunye nefuthe kwingqesho kuncitshisiwe, ukulawula ukuziqhelanisa notshintsho oluzayo, ngeyona ndlela ibalaseleyo kunye neyona ikrelekrele.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Uqoqosho ngokubanzi » Ngqesho » Iziphumo zexesha elizayo zeerobhothi kunye netekhnoloji entsha kwezengqesho
Ixesha elizayo kwii-bitcoins: enye indlela yokutyala imali